You are at:Home»မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းအကျဉ်း
ယနေ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟုခေါ်သော နယ်မြေတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် ဗမာလူမျိုးများနှင့်ဗြိတိသျှတို့၏ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခြင်းမခံရမီအချိန်တွင် သီးခြားလွတ်လပ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှ အမြန်လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်နှင့် တန်းတူုရေးကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းလူမျိုးခေါင်းဆောင်များသည် ဗမာလူမျိုးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာ့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ပင်လုံစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ တန်းတူညီမျှရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အခြေခံသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက် စစ်အစိုးရအား နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော် လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။
Arakan (Rakhine) Sittwe 3,188,963 14,200 mi²
Chin Hakha 478,690 13,907 mi²
Kachin Myitkyina 1,689,654 34,379 mi²
Karen (Kayin) Hpa-An 1,572,657 11,731 mi²
Karenni (Kayah) Loikaw 286,738 4,530 mi²
Mon Mawlamyine 2,050,282 4,747.8 mi²
Shan Taunggyi 5,815,384 60,155 mi²
Irrawaddy (Ayeyarwady) Bassein (Pathein) 6,175,123 13,566 mi²
Pegu (Bago) Pegu (Bago) 4,863,455 15,214 mi²
Magway Magway 3,912,711 17,305 mi²
Mandalay Mandalay 6,145,588 14,295 mi²
Sagaing Sagaing 5,320,299 36,535 mi²
Tanintharyi Dawei 1,406,434 16,735 mi²
Rangoon (Yangon) Rangoon (Yangon) 7,355,075 3,927 mi²
*Nay Pyi Taw 1,158,367
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်
Arakan (Rakhine) 17 12 29
Chin912 21
Kachin 18 12 30
Karen (Kayin)712 19
Karenni (Kayah)712 19
Mon 10 12 22
Shan 55 12 67
Irrawaddy (Ayeyarwady) 26 12 38
Mandalay 36 12 48
Magway 25 12 37
Pegu (Bago) 28 12 40
Rangoon (Yangon) 45 12 57
Sagaing 37 12 49
Tanintharyi 10 12 22
States/Divisions Total 330 168 498
Military Representatives 110 56 166
၁) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့
၂) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ၏ ၂၅ % ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ အဆိုတင်သွင်းသည့် တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များအား ပေးအပ်ထားသည်။ ( ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်). အခန်း (၄)၊ အပိုဒ် ၁၀၉ နှင့် ၁၄၁)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်အမတ်စုစုပေါင်း၏ ၇၅% ကျော်မှ ထောက်ခံမဲ့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
(ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်). အခန်း ၁၂၊ အပိုဒ် ၄၃၆.)